shwezinu: သော်တာဆွေ ၏ ဖြတ်စ နှင့် ကျော်စံကေး, အပိုင်း (၆)
သော်တာဆွေ ၏ ဖြတ်စ နှင့် ကျော်စံကေး, အပိုင်း (၆)
မောမောပန်းပန်းနှင့် အရသာရှိလှစွာ သောက်ရ၍ နို့ကုန်ခါနီးတွင် အတော်ကလေး အားရှိလာကာ နို့ ကို ဇိမ်နှင့် သောက်နေသော ဖြတ်စ၏ဦးခေါင်း ကို ဖန်ခွက်ဖြင့် လှမ်းချပြီး အလျင်အမြန် လည်မျိုကို တွန်းလှဲ၍ ယခင် နည်းအတိုင်း နှစ်ပါသွားဆက် ကြပြန်လေ၏။ ဤအကြိမ် ကား နောက်ဆုံး နှစ်ပါး သွားခြင်း ဖြစ်ပေ၏။ အကြောင်းမှာ မာဂရက် ၏ လက်ကိုင်သန်သန်နှင့်ဖန်ခွက်အထူကြီး ခွပ်ခနဲ ကွဲအောင် တအား ချလိုက် သော ဒဏ်သည် မောင်ဖြတ်စ၏ ဦးခေါင်းနှင့် မျက်နှာတစ်ခုလုံး ကုလား သင်္ကြန် ကျစေလေ၏။ ကို ဆက်ဖတ်ရန်..............
မိန်းမတို့မည်သည် သွေးထွက်သံယိုကို မမြင်လို၊ မကြည့်ရဲ ကြောက်ရွံ့ ထိတ်လန့်တတ်သည်။ သနားကြင်နာ စိတ် ပေါ်လာတတ်သည်။
ဤအတွင် နှစ်ပါသွားခန်းကိုရပ်၍ လွမ်းခန်းကို စရလေပြီ။
မာဂရက် သည် နီရဲသောအရောင်ကို မြင်လိုက်သည်နှင့် တစ်ပြိုင်နက် လက်နှစ်ဖက်ကို ဘရိတ်အုပ် လိုက်ကာ သွေးရည် လွှမ်းနေသော မောင်ဖြတ်စ၏ မျက်နှာကို ထိတ်လန့်စွာ ကြည့်နေမိလေ၏။
မောင်ဖြတ်စ ခမျာမှာ မသက်သာရှာလှပါ။ ၃ နာရီကျော်မျှ အတွင်းကြေအောင် ထုနှက်ထားသော ဒဏ် နှင့် နောက်ဆုံးပိတ် အားကုန်နှိပ်လိုက်သော ဖန်ခွက်ဒဏ်တို့ကြောင့် မချီမဆန့် ခံရတော့သည်။ ပြစ်မှား မိသော အချစ် တရားကြောင့် ခန္တီပါရမီလက်ကိုင်ထားခဲ့သော်လည်း ယခုမူ လွန်လွန်းလှတဲ့ဟာမ ဟု ကျွဲမြီးတိုချင် သလို ပင် ဖြစ်လာ၏။
သို့သော် ''ဒေါသကြီးသော မိန်းမအား သည်းခံနေခြင်းသည် အကောင်းဆုံးလက်တည်း'' ဟူသော သ ဘောတရား ကို နှလုံးမူ၍ လှုပ်ရှားတွန့်လိမ်ခြင်းကိုမျှ မပြုဘဲ မချိလွန်း၍ မူးမေ့နေသည့်ဟန်ဖြင့် စီး ကျနေ သောသွေး များ၏ ပူရှိန်းရှိန်းဒဏ်ကို ခံစားရင်း ခွေခွေကလေး မှိန်းနေလေ၏။
ယင်းသည့် အတွက်ကြောင့်ပင် မာဂရက်မှာ ဖြတ်စ၏ ကြက်ပြုတ် မျက်နှာကလေးကို တစိမ့်စိမ့်ကြည့် ရင်း ကရုဏာစိတ် များ တဖွားဖွားပေါ်ပေါက်လာကာ..
''ကိုဖြတ်စ... ကိုဖြတ်စ'' ဟု ပခုံးကို လှုပ်၍ တတွတ်တွတ်ခေါ်လေ၏။
မေ့ချင်ဟန်ပြုနေသောသူမှာ တော်တော်နှင့်သတိမရ၊ မာဂရက်၏ ကရုဏာကို နားထောင်လျက် ယုယ စွာ လှုပ်ကိုင်နေသော လက်ဖ၀ါးနု ပူပူနွေးနွေးကလေး၏ အရသာကို ခံစားကာ ဇာတ်လမ်းနောက်ပိုင်း အတွက် စဉ်းစား ရင်း မှိန်းခံနေလေ၏။
တဖြည်းဖြည်း ဒေါသမှ သောကသို့ ကူးပြောင်းလာသော မာဂရက်မှာ ပခုံးကို လှုပ်၍ လှုပ်၍ တတွတ်တွတ်ခေါ်နေရာ မှ ပရိဒေ၀ မီးတောက်လောင်လာကာ …
"ဟင် … ကိုဖြတ်စ ကိုဖြတ်စ၊ မာ လက်လွန် သွားပြီ ထင်ပါရဲ့နော်၊ ဖြစ်မှဖြစ်ရလေရှင်… " ဟု ငိုသံပါ လာလျက် မျက်ရည် များ တပေါက်ပေါက် ကျလာကာ ခါးကြားမှ လက်ကိုင်ပ၀ါကလေးကို ထုတ်ပြီး သွေးများကို သုတ်ပေးမိတော့လေ ၏။
ဤတွင် အမူကောင်းမင်းသားသည် မျက်လုံးဖွင့်လာကာ တနုံ့နုံ့လှုပ်ရှားရင်း မချိသော်လည်း အောင့်ခံ နိုင်သော အမူ အရာဖြင့် …
"ကိစ္စမရှိပါဘူး မာ… မာ့ကို သွေးတွေ ပေကုန်ပါ့မယ်… ဖယ်ပါမာ … " ဟု ကရုဏာသံနှင့် ပြောလေ၏။
"သိပ်များသွား သလားဟင်၊ မှန်းစမ်း… ဘယ်နေရာလဲ… မာ့သေတ္တာထဲမှာ ပရုတ်ဆီပါတယ်လေ၊ မာ လုပ်ပေး မယ်နော် "
ကြင်နာသောအသံနှင့် ယုယသော အပြုအစုမှာ မောင်ဖြတ်စအဖို့ အကြီးအကျယ် ဇိမ်ရှိလှသည်။ အထု အရိုက် ခံရသော ဒဏ်များပင် မေ့သွားချေပြီ။
မိန်းမတို့မည်သည် ဒေါသကြီးသလောက် ကရုဏာများတတ်၏။ မကြာမီ မောင်ဖြတ်စမှာ ကြင်နာသော နာ့စ်မလေး ၏ အပြုအစုအယုအယဖြင့် ဦးခေါင်းတွင် ပတ်တီးကလေး အဖွေးသားနှင့် ရှိနေချေပြီ။ မာဂရက်ကား ခုတင်တိုင် ကို လက်နှစ်ဖက်ဖြင့်ကိုင်ကာ သူ၏ဖြစ်အင်ကိုတွေး၍ တရှိုက်ရှိုက် ငိုကြွေးလေ တော့သည်။
ဖြတ်စမှာ ခုတင်ပေါ်မှထ၍ လမ်းလျှောက်ရင်း မာဂရက် ကို ကျေနပ်အောင် နှစ်သိမ့်ပြော ဆိုရန် တွေး တောရချေပြီ။ အဆင်သင့်ပင် လောင်းကုတ်အင်္ကျီထဲမှ ကိုကောင်း ၏ ဆေးတံနှင့် ဆေးဘူးမီးခြစ် တို့ကို တွေ့လေ၍ စုံထောက်ဦးစံရှား၏ စဉ်းစားခန်းဝင်သော စတိုင်မျိုးပေါ်ပေါက်သွားလေ၏။
သူ၏ မျက်တွင်းကျကျ မျက်ခုံးကလေး ရှုံ့ကာ ရှုံ့ကာ ဆေးအိုးကိုဖွာရင်း ခုတင်နံဘေး တွင် ခေါက်တုံ့ ခေါက်ပြန်လျှောက်လေ၏။ သုံးလေးခေါက်မျှ အသွားအပြန် လျှောက်မိလျှင် ရှိုက်ရှိုက်ငင်ငင် ၀မ်းနည်း ပက်လက် ငိုနေသော မာဂရက် ၏အနီး၌ ရပ်လိုက်ကာ …
"မောလှပြီ မာ … သိပ်မငိုပါနဲ့တော့၊ အကြောင်းအားလျော်စွာ ကံအတိုင်းဖြစ်ရပြီပဲ၊ မထူးတော့ပါဘူး။ ကံတရား ဘယ်သူ လွန်ဆန်လို့ရမလဲ။ ဒီကလည်း ညနေက ဖြစ်အင်ကြောင့် ရှက်လွန်းလို့ အိမ်ပေါ်က ဆင်းပြေးပြီး ညမှောင် မှ ပြန်လာခဲ့တာ။
အိမ်ရှေ့မီးလင်းနေ လို့ ရုတ်တရက် မလာဝံ့ဘဲ နောက်ဖေးပေါက် က အလစ်ချောင်း တက်မယ်အကြံ နဲ့ မှောင်ရိပ်ခိုနေတုန်း ဗြုံးဆို မာက သေတ္တာကလေး ဆွဲလာပြီး ကိုကို ဖြတ် စောစောလာတာ အဆင်သင့်ပဲဆိုပြီး ဆွဲခေါ်တော့ " မာဂရက်က ဖြတ်၍… "ကိုကိုဖြတ် ခေါ်တာ မဟုတ်ပါဘူးရှင့်။ ကိုကိုလတ် ခေါ်တာပါ။ ကျွန်မ ရည်းစား စစ်ဗိုလ် မင်းရဲလတ် မှတ် လို့၊ သူနဲ့ ကျွ့န်မ သမီးရည်းစားဖြစ်နေတာကြာလှပြီ။ ကျွန်မ မိဘများက သဘောမတူ လို့ ဒီကြည့်မြင် တိုင်ကို လာပို့ထားတာ။ အခုည လာခေါ်ဖို့ ချိန်းထားပစ်ခဲ့ တာ။ နောက်ဖေးပေါက်က မျှော်နေတုန်း ရှင်က သူဝတ်နေကျ စစ်လောင်းကုတ်ကြီးနဲ့ သူ့ဦးထုပ်မျိုးဆောင်း လာတော့ မှောင်ထဲက သူမှတ်လို့ရှင်ရဲ့။ ကိုကိုလတ်ဆိုတာကို ကိုကိုဖြတ်ရယ်လို့ ရှင့်နားပဲ ကြားတတ်တယ် "
မောင်ဖြတ်စသည် စိတ်ထဲမှ အနည်းငယ်ပြုံး၍ …
" အေးလေ … ခုတော့ ကိုကိုလတ်မဟုတ်တော့ဘူး၊ ကိုကိုဖြတ် ကိုကိုဖြတ်ပေါ့ …. "
"တော်စမ်းပါရှင်၊ ရှင်နာမည်ကြီးကို ကိုကိုဖြတ်လုပ်မနေစမ်းပါနဲ့။ ကိုကိုဖြတ်ရယ်လို့ ခေါ်ဖို့မပြောနဲ့ နားထဲ ကြား ရတာတောင် ဘယ်လိုမှ အဆင်မပြေဘူး "
" အေးလေ …. ခုတော့ ဟုတ်မယ်ပ၊ အကျင့်မရသေးလို့ပါ …။ နောက် ခေါ်နေကျသွားတော့ ကိုကိုဖြတ် ကိုကိုဖြတ် နဲ့ အဆင်ပြေသွားမှာပေါ့။ ဖြတ်နဲ့လတ်လည်း ဘာမှအကြောင်း မထူး ပါဘူး။ ဖြတ်(ဖျတ်) လတ်သည်ဆိုတဲ့ စကားလုံးမှာတောင် ဖြတ်က အရင်လာတာ၊ ဖြတ်ပြီးမှ လတ်ရတာပါ …."
မာဂရက် မှာ စိတ်မရှည်နိုင်တော့ဘဲ …
"တော်ပါရှင် … နာမယ်ချင်း နှိုင်းမနေစမ်းပါနဲ့၊ လူချင်းနည်းနည်းမှ တူတာမဟုတ်ဘူးရှင့်။
ဟိုက မျိုးချစ်စိတ်နဲ့ စစ်ဗိုလ်၊ ကာယဗလမှူး၊ မောင်ပျဉ်းမနားဘွဲ့ ရတဲ့လူရှင့်၊ ရှင့်လို … အလုပ်မရှိတဲ့ ၁၀၉၊ အရက်သမား၊ အလောင်းသမား၊ ဖာကျိုး မဟုတ်ဘူးရှင်ရဲ့။ ခုတော့ … ခုတော့ … လူမှားပြီ၊ ရှင့်ရောဂါတွေနဲ့။ အမယ်လေး … ကျွန်မ လူဖြစ်ရှုံးရပြီရှင်ရဲ့ " ဟုဆိုကာ ရှိုက်ကြီးတငင် ငိုကြွေးလေ၏။
မောင်ဖြတ်စ သည် သူ့အင်္ကျီအိတ်ထဲမှ စာရွက်ခေါက်ကလေးတစ်ခုကို အလျင်အမြန် ဆွဲထုတ်ကာ …
" ဟိုး … ဟိုး … ဒါအတွက်တော့ ဒီလောက်ပူမနေပါနဲ့။ ဟောဒီမှာ ကြည့်ပါ။ ပယ်နီစလင် တန်ခိုးကြောင့် ရောဂါတွေ အမြစ်ပြတ်တဲ့ အကြောင်းကို ဆရာဝန်ထောက်ခံစာရှိပါတယ်။ ရော့ … မယုံကြည့်ပါ၊ ဒီရောဂါ အတွက်တော့ မပူ စမ်းပါနဲ့ "
" တော်စမ်းပါ၊ ပြမနေစမ်းပါနဲ့၊ မကြည့်ချင်ပါဘူး …၊ ရှင့်စိတ်ထားနည်းနည်းမှ ကောင်းတာမဟုတ်ဘူး။ ကျွန်မ လူ မှားပြီး လိုက်လာမိတာ ကို ရှင် တမင်ဟန်ဆောင်ပြီးတော့ ကားပေါ်မှာ …. ကားပေါ်မှာ ကျွန်မကို ဗိုလ် မင်းရဲလတ် ဆိုရင် ဒီလို တစ်ခါမှ … " " အို ..၊ ဒါတော့ အပြစ်တင်ရင်လည်း ခံရမှာပဲ။ အခွင့်အရေးရတုန်း မရွယ် ဘဲ စော်ကဲမင်းဖြစ်အောင် လုပ်ရ တာ၊ မာဂရက်ကို မြင်မြင်ချင်းတကယ့်မေတ္တာစစ်နဲ့ ချစ်မိလို့ စာတောင်ပေးတယ် မဟုတ်လား " " ရှင့်စာကို ကျွန်မဖတ်သလား …၊ အလေးပြုသလား "
" မဖတ်မှန်း အလေးမပြုမှန်းသိလို့ပဲ အခွင့်ကောင်းကြုံတုန်း လက်မလွတ်အောင် ယူလိုက်ရတာ …၊ ဒီကိစ္စ ကတော့ လူတို့ မတွေးမထင်နိုင်လောက်အောင် ထူးထူးဆန်းဆန်း ဖူးစာရေးနတ်က ကြံဖန်ပြီး ဂဟေဆက်ပေး တာ မချစ်ချင် မနေရ … "
" အံမယ် …၊ ဒီကိစ္စကြောင့်များ ရှင့်ကို ဇွတ်မှိတ်ပြီး ချစ်မယ်မှတ်သလား၊ ဝေးပါသေးရဲ့၊ ကိုယ့်ကိုယ်ကိုယ် သတ်သေလိုက်မယ် သိရဲ့လား။ ရှင့် ကိုယ်ရှင် ဟန်လှပြီ အောက်မေ့မနေနဲ့ "
" အမယ်လေး … ကိုယ့်ကိုယ်ကိုယ်တော့ သတ်မသေလိုက်ပါနဲ့ဗျာ …၊
အဖန်ငါးရာ ငါးကမ္ဘာတဲ့ …၊ ဒီလောက်ပဲ ကိုကိုဖြတ်အပေါ်မှာ "
" အလိုလေးတော် … ရှင့်ကိုယ်ရှင် ကိုကိုဖြတ် လုပ်မနေစမ်းပါနဲ့၊ ဒီနာမယ်ကြီး ကြားရပြင်းကပ်လွန်းလို့ပါ "
" ဒါဖြင့် ကိုကိုစ "
မာဂရက်သည် နားကိုပိတ်ကာ …
" အမယ်လေး … လုပ်ပြန်ပါပြီ၊ ဒါလည်း မထူးပါဘူး "
" အေးလေ … ခေါ်နေမကျ အကျင့်မရှိသေးတော့ နောက်တော့သာ "
" အမယ်လေး … ဘယ်တော့မှလည်း ခေါ်နေကျ အကျင့်ရမှာ မဟုတ်ဘူး၊ တော်စမ်းပါတော့" ဟု ဆွဲဆွဲငင် ငင် ပြော လိုက်၏။
" ကဲ … ဒါဖြင့် ကျွန်တော် မောင်ဖြတ်စရဲ့အပေါ်မှာ ဘယ်အတွက်ကြောင့် ဒါလောက် ခါးခါး သီးသီး ဖြစ်နေတော်မူတာလဲ ခင်ဗျာ … အမိန့်ရှိပါဦး "
" အလိုလေးတော် … ဒါများ မေးနေရသေးလား၊ ရှင့်အကျင့်စာရိတ္တ ဘယ်လောက်များ ဆိုးဝါးနေသလဲ၊ ကိုယ့် ဟာ ကိုယ် စိစစ်ကြည့်ပါလား "
" ဘယ်လိုများ ဆိုးဝါးနေလို့လဲဗျာ …၊ ပြောစမ်းပါဦး၊ ဟုတ်တာ ၀န်ခံပါ့မယ် " ဟု ခြောက်ပစ်ကင်းမျက်နှာ ကလေးနှင့် ပြောလိုက်၏။
မာဂရက်မှာ မျက်လုံးပြူးကာ …
" အလိုလေး … လာလာချေသေးရဲ့တော်၊ ကဲ … ရှင် … အရက်မသောက်တတ်ဘူးလား "
" အံမယ်လေး၊ ဒါများ မေးနေရသေးလားဗျာ …၊ သောက်တတ်ပါတယ် ခင်ဗျ၊ သောက်တယ်မှ အမိနို့ရည်ကဲ့ သို့ နှစ်သက်ပါတယ် "
" ရှင် မိန်းမရော မလိုက်စားဘူးလား "
" လိုက်စားပါသော်သောဗျာ၊ မယုံ ဒီမှာကြည့်ပါတော့ " ဟု ဆိုကာ လည်ပင်းရှိ ပုလဲညိုလုံးကလေး များနှင့် တူသော စီရရီ ကြပ်အသီးကလေးများကို လက်ဖြင့် အသာပွတ်ပြရင်း " ခုတော့ … ဒီရောဂါတွေ ပင်နီစလင် သတ္တိကြောင့် အမြစ်ပြတ်သွားပါပြီ "
" နို့ပြီး ရှင် လောင်းကစားခြင်းကော မပြုဘူးလား "
" ဒါတော့ဗျာ … ပိုက်ဆံရှိတဲ့အခါ မြင်းပွဲ၊ ဖဲဝိုင်းသွားပြီး အပွကြံတာပဲ "
" ကဲ …. ဒါဖြင့် ရှင့်အကျင့်စာရိတ္တ ဟာ ဘယ်မှာကောင်းကွက်တစ်ချက်ရှိသေးလို့လဲ …။ အဆိုးဟူသမျှ ရှင့် ချည့် စုနေတာပေါ့ …၊ ဒီထက် ဆိုးတာများ ရှိသေးရဲကလားလို့ "
ဖြတ်စသည် မျက်ခုံးကို အံ့သြသလို ပင့်ချီကာ …
" အလို …၊ ဒါလေးနဲ့များ အကျင့်ဆိုးတယ် …၊ မကောင်းဘူးလို့များ ဆိုနိုင်သလားဗျာ၊ ကျုပ် အရက်သောက် တယ်၊ ပိုက်ဆံ့ ရှာစားတဲ့ အလိုတူ မိန်းမကို ပိုက်ဆံပေးပျော်ပါးတယ်၊ မိကောင်းဖခင်သားသမီးတွေ မဖျက် ဆီးဘူး…။
တချို့ ဂုဏ်သရေရှိ လူကြီးလူကောင်းအမည်ခံ နှုတ်ခမ်းမွှေးကားကားကြီးတွေ သာ ဆင်းရဲတဲ့ ကလေးမလေးတွေ ကို ပိုက်ဆံပေး ဖျက်ဆီးတာ၊ နို့ပြီး ကျုပ်လောင်းကစားတယ် …။ ကိုယ့်ငွေ ကိုယ် ရင်းပြီး ငွေတိုးအောင် အရှုံးအနိုင် စွန့်တာ၊ သူများပစ္စည်း လိမ်ယူကာ မဟုတ်ဘူး၊ ညာယူတာ မဟုတ်ဘူး၊ ဆင်းရဲသားတွေ ကို သွေးစုပ်နေတဲ့၊ သူတို့ကိုယ်သူတို့ ဓနရှင် ထင်နေတဲ့ လူတွေလောက် မဆိုးပါဘူး "
" ကျုပ်ဝါသနာ အတိုင်း ကျုပ်လုပ်တာတွေမှာ မတရားတာ တစ်ချက်မှ မရှိဘူး၊ ကိုယ်ကောင်းကိုယ်စံ၊ ကိုယ်မ ကောင်း ကိုယ်ခံ၊ ဘယ်သူမှ အနှောင့်အယှက် ဒုက္ခမဖြစ်ဘူး၊ တတ်နိုင်ရင် ကိုယ်ကသာ ကူညီတယ် …။ လောကကြီး မှာ လူတစ်ဖက်သား သို့မဟုတ် သတ္တ၀ါတစ်ခုခုကို သူစိတ်မတူ ကိုယ်မပါဘဲ တိုက်ရိုက်သော် လည်းကောင်း၊ သွယ်ဝိုက် ၍သော်လည်းကောင်း၊ သူနစ်နာအောင် သို့မဟုတ် စိတ်ထိခိုက်အောင် မလုပ်လေသမျှ အပြစ်မရှိဘူး လို့ ကျုပ်ယူဆတယ် "
သူ့ဘာသာသူ လောင်းကစားတယ် …၊ လိုက်စားတယ် …၊ သောက်တယ် …၊ နာမည်ဆိုး သူခံတယ်၊ သူ အနစ်နာ ခံတယ်၊ စဉ်းစားဥာဏ်ကျယ်ကျယ်နဲ့ ကြည့်ရင် ဒီလိုလူမျိုးကို ဘာအပြစ်ဆိုစရာရှိလဲ။ မသောက်ဘူး၊ မလောင်းဘူး၊ မလိုက်စားဘူးဆိုတဲ့ ဟိတ်ဟန်ထုတ် အမူအရာပြပြီး တစ်ဖက်သားတွေ ဒုက္ခ အမျိုးမျိုးရောက် အောင် ပြုမူနေကြတဲ့ အဆိုးမဆိုပါနဲ့၊ အပြစ်မမြင်တိုင်းလည်း အကောင်း မထင်ပါ နဲ့၊ ကောင်းရာမှဆိုး ဆိုးရာမှ ကောင်းတဲ့သဘာဝတွေ၊ နည်းလမ်းတွေ အများကြီးရှိပါတယ်။ ဘုရားဖြစ်တော်စဉ် မှာလည်း ကြည့် ပါဦး "
မာဂရက်မှာ နားငြီးလာကာ …
" တော်စမ်းပါ၊ ရှင် စကားရေးကြွယ်မနေစမ်းပါနဲပ၊ ရှင် ကျွန်မကို အခု နစ်နာအောင် လုပ်လိုက်ပြီ မဟုတ်လား "
" အလို … ဒါတော့ နစ်နာစေလိုတဲ့စိတ်ဓာတ် တစ်စေ့ကလေးမှ မရှိပါဘူး။ ဖျားစူးရပါစေရဲ့ …၊ ကိုယ်တကယ် ချစ်လို့ တကယ်ပေါင်းမယ် အဓိဋ္ဌာန်ချပြီးသားပါ "
" ရှင် ပေါင်းမယ်ဆိုပေမယ့် ကျွန်မက မပေါင်းနိုင်ဘူးရှင်ရဲ့၊ ရှင် ဒီလို အကျင့်ဆိုးတွေ ရှိနေတာ ရှေ့လျှောက် ဘယ်လိုလုပ် လူတစ်လုံး သူတစ်လုံး လုပ်မလဲ "
" အလိုလေး၊ ဒီအတွက်တော့ မပူပါနဲ့ဗျာ၊ ဟောဒီ မာဂရက်ကလေးနဲ့သာ ပေါင်းရရင်လေ …၊ မာ့စကားကို နားထောင်ပါမယ်.. မာ မကြိုက်တာ မဟုတ်ပါဘူး မာ၊ ထားရာနေပါမယ်၊ မာမကြိုက်တာလုပ်ရင်လေ … ခုနလို လည်ပင်းတွန်းလှဲပြီး ထုပါ ရိုက်ပါ၊ မာ ဆုံးမသမျှ ကျွန်တော် ခံပါ့မယ် …၊ ဟိုတုန်းက မိဘစကား နားမထောင်ခဲ့ သမျှ ဟောဒီ ချောနှမကလေးနဲ့ ကျကာ မှ အကျွတ်တရားယူပါတော့မယ် …၊ မာကသာ ခုအခြေကျမှ ငြင်းလိုက်ရင်တော့ အရင်က ထက်ပိုပြီး တေပေနေဦးမှာပဲ၊ စဉ်းစားပါ မာရယ် …၊ လူကောင်း တစ်ဦးကို မကောင်းတာလုပ်ဖို့ လွယ်သလို၊ လူကောင်းတစ်ယောက်ကို အကောင်းဖြစ်နေစေတာလည်း အကြောင်းမထူးပါဘူး …။ မကောင်းဖြစ်နေတဲ့ လူကိုသာ အကောင်းဖြစ်အောင် လုပ်ဖို့က ခဲယဉ်းပါတယ် …၊ ဘုရား ကိုယ်တော်တိုင်မှပဲ မကောင်းဖြစ်နေတဲ့ သတ္တ၀ါ တွေ၊ မိုက်မှားနေတဲ့ ဝေနေယျတွေကို အကောင်းဖြစ်အောင် လုပ် ဖို့ တမင်သက်သက် သူ့ကိုယ်သူ အနစ်နာ ခံပြီးတော့ ခဲခဲယဉ်းယဉ်း ကြိုးစား လာခဲ့ရတာ … "
မာဂရက်က ဖြတ်၍ " ဟေဟေ့ … တယ်ဆိုတဲ့စာပါလား၊ သူကောင်းဖို့ပဲ လူများက အနစ်နာခံပြီးတော့ … ဟီဟိ …" ဟု ရယ်သွမ်း ကလေး သွေးလိုက်သဖြင့် မောင်ဖြတ်စမှာ အတော်ကလေး အားတက်လာမိ၏။
သို့သော် မာဂရက်က မျက်နှာပိုးသတ်ကာ " ရှင်ပြောသလို၊ ရှင့်ကို လူကောင်းတစ်ယောက် ဖြစ်စေပါပြီတဲ့ ရှင် …၊ ဒါပေမဲ့ … ဒါပေမဲ့ … ဟုတ်တာပြောရရင် ရှက်စရာ မရှိပါဘူးလေ၊ ကျွန်မရဲ့ ရည်ရွယ်ချက်မှာ မြန်မာ ပြည်ရဲ့ သားကောင်း ရတနာတွ မွေးဖို့အာသီသနဲ့ ကျွန်မကိုယ်တိုင် ကျန်းမာလှပရေးလိုက်စားပြီးတော့ ကာယဗလ သမားနဲ့မှ အိမ်ထောင်ပြုမယ် စိတ်ကူးထားတာ … ခုတော့ ရှင့်လို ပိန်ချည့်သေးကွေး လူ့နှံ့ပေါင် ကလေးဆိုတော့ မဖြစ်ဘူး ရှင် မဖြစ်ဘူး၊ ရှင် လူကောင်းဖြစ်အောင် ကျွန်မ အနစ်နာခံလို့ တိုင်းပြည်မှာ အကျိုးရှိရင် တော်သေးရဲ့ …၊ ခုတော့ မဖြစ်ပါဘူးလေ မဖြစ်ပါဘူး" ဟု ညည်းညည်း ညူညူ ပြောပြန်လေရကား … ဖြတ်စမှာ အကြံရ ကျပ်သွားကာ ဆေးတံကို ဆေးအသစ်ထပ်ထည့်ပြီး ခေါက်တုံ့ခေါက်ပြန် လျှောက်ရင်း ဦးစံရှားလို စဉ်းစားခန်းဝင်ရပြန်လေ၏။
ကာယဗလနှင့် ပတ်သက်၍ မိမိကိုယ်မိမိ ကြည့်လိုက်ပြန်သော် ပိန်ညှောင် ခါးချည့် အားမရှိ။ လက်နှံပေါင် ခြေပုလွေကလေးနှင့် လမ်းလျှောက်ရင်းမှ တစ်ချက်၊ တစ်ချက် ဖနောင့်နှင့် ခြေမျက်စိ ခတ်၍ နေသေးသည်။ အသက်အစိတ်ကျော်မှ ကာယဗလ လေ့ကျင့်၍လည်း ရတော့မည်မဟုတ်။ နဂိုကပင် ၀ါသနာ မပါခဲ့၍ နောက် လေ့ကျင့်ပါမည်ဟုလည်း အာမ မခံနိုင်။ မာဂရက်၏ တစ်နည်းနည်းဖြင့် တိုင်းပြည်ကောင်းစားရေးနှင့် ပတ်သက်၍ အကျပ်ကိုင်နေရာ ၃-၄ ခေါက်မျှ ဆေးတံဖွာရင်း လျှောက်မိလျှင် ပင် ဥာဏ်ကြီးရှင် ကိုဖြတ်စ အကြံရလေ၏။
ရုတ်တရက် မတ်မတ်ရပ်လိုက်ကာ …
" မာ … " ဟု တစ်လုံးတည်း ခေါ်လိုက်လေ၏။
ထွေရာလေးပါး စဉ်းစားနေရာမှ …
" ဟုတ်ကဲ့ရှင် … ဆိုစမ်းပါဦး "
" တိုင်းပြည်ကောင်းကျိုး အတွက် ရည်ရွယ်ပြီးတော့ ကျန်းမာရေး လေ့ကျင့်ပြီး ကာယဗလ လိုက်စားတယ်ဆို မဟုတ်လား …" " ဟုတ်ကဲ့ရှင့် " " မိန်းကလေးတွေကိုယ်တိုင်က ကျန်းမာလှပရေး လေ့ကျင့်ပြီးတော့ ယောက်ျား ကာယဗလသမားနဲ့မှ အကြောင်းဆက်မြယ် မဟုတ်လား၊ ဒီတော့ … ဒီတော့ … ကျန်းမာထွားကျိုင်း သန်စွမ်း တဲ့ မြန်မာပြည်ရဲ့ သားကောင်း ရတနာကလေးတွေ မွေးရော၊ အင်း … ဟုတ်ပါပြီ၊ နို့ပြီး …. တိုင်းပြည်မှာ အများကြီး ရှိတဲ့ ကိုယ် တို့လို ပိန်ညှော် ခါးချည့်တွေကကော ဘယ်လိုမိန်းမမျိုးနဲ့ ယူရမလဲ … "
" ရှင်တို့လို ကျန်းမာရေး ဂရုမပြုတဲ့ အပေါ်ယံအရောင်တင်တွေ အပျိုမီးယပ်တွေနဲ့ ယူကြပေါ့ "
" ဒီတော့ … ဘယ်လို သားသမီးတွေ မွေးရောလဲ "
" ရှင် တို့လို ခါးချည့်၊ ပိန်ညှော် ဖလံချောင် နှံပေါင်တွေ မွေးပေါ့ "
" ဒီတော့ … မာတို့လို မိဘမျိုးက မွေးတဲ့ သားသမီးတွေနဲ့ ကိုယ်တိုပလို မိဘမျိုးကမွေးတဲ့ သားသမီးတွေ လူကောင်ချင်း တူပါဦးမလား "
" မတူဘူးပေါ့၊ ကိုယ်ပေါက်ပစ်နိုင်လောက်အောင် လူကောင်ချင်း ကွာနေမှာပေါ့ … "
" စိတ်နေသဘောထားချင်းကော တူပါဦးမလား "
" မတူဘူး၊ ကာယဗလရှိတဲ့သူက ဥာဏ်ပညာကောင်းမယ်၊ သည်းခံတတ်မယ်၊ စိတ်သဘောထား မြင့်မြတ်မယ်၊ ကျန်းမာရေး မပြည့်ဝတဲ့လူတွေက ဥာဏ်နည်းမယ်၊ စိတ်တိုမယ်၊ သဘောယုတ်မယ် "
" အို … ဒါက စတုတ္ထတန်း ကျန်းမာရေးစာအုပ်ထဲက အညွှန်းတွေပါ၊ အတိအကျ မဟုတ်ပါဘူး၊ သို့သော်လည်း အဲဒီအကောင်းအဆိုးတွေ ကို ခေတ္တ ဘေးချိတ် ထားပါဦးလေ။ လူထုအရေးကြီးနေတဲ့အခါမှာ လူထု စကားပြောရအောင်၊ ခုန မာ ပြောတဲ့အတိုင်းဖြင့် မလိုက်စားတဲ့ လူစုတွေက မွေးတဲ့သားသမီးတွေဟာ ကိုယ်လုံး ကိုယ်ထည် လူကောင်ချင်း မတူဘူး၊ စိတ်နေသဘောထားချင်းလည်း မတူဘူး၊ ဒီတော့ တိုင်းပြည်မှာ လူနှစ်မျိုး ကွဲပြီပေါ့ "
မောင်ဖြတ်စ၏ ဆိုလိုရင်းကို ရိပ်မိသော မာဂရက်သည် ရုတ်တရက် သွားတက်ကလေးများ ပေါ်အောင် ပြုံး၍ လက်ဝါးကလေးနှစ်ခု ကို ရင်အုံရှေ့တွင် ဆတ်ခနဲ ယှက်လိုက်ကာ …
" အလိုလေး ဟုတ်လှတယ်ရှင်၊ ကာယဗလ လိုက်စားတဲ့ လူတွေကို ပဲ သွေးခွဲဝါဒ သမားတွေဖြစ်အောင် ပြော ရော့ မယ်။ တော်လှတယ်၊ ဒီမှာ ကိုအ၀ှာရဲ့ မာပြောတာက ကာယဗလ ကျန်းမာရေး လိုက်စားခြင်းရဲ့ ကောင်း ကျိုးနဲ့ မလိုက်စားတဲ့လူတွေရဲ့ ခြားနားခြင်းကို ပြောတာရှင်ရဲ့။ ကာယဗလ လိုက်စားခြင်း ရဲ့ ကောင်းကျိုးတွေကို ရှေ့ဆောင်နမူနာအဖြစ်နဲ့ မယ်ဗမာ၊ မောင်ဗမာ၊ မယ် ဒဂုံ အစရှိတဲ့ ရွေးကောက်ပွဲတွေလုပ်၊ ဆုတွေပေးနဲ့ တဖြည်းဖြည်း အားကျလာပြီး တစ်စ တစ်စ တစ်နိုင် လုံး လိုက်စားကြမှာပေါ့''
''တစ်နိုင်ငံလုံး မပြောနဲ့ဦး မာရယ် တစ်နေကုန် တစ်နေခန်း အလုက်ကြမ်းလုပ်နေရလို့ သူ့ဟာသူ ကျန်း မာ သန်စွမ်းနေကြ တဲ့ လူများစု တောသူတောင်သားတွေ နံဘေးထားပြီးတော့ မြို့ပေါ်မှာ အလုပ်နုသမား အဖြစ် နဲ့ နေကြတဲ့ လူနည်းစုကိုပဲ ကြည့်ပ့ဦး။ လူတစ်ရာမှာ တစ်ယောက်လိုက်စားနိုင်ကြရဲ့လားလို့''
''အို.. ဒါက ခုမှမစရှိသေးတာ၊ နောက်နောင် စောင့်ကြည့်ပါဦး... ''
''စောင့်မနျေပါနဲ့တော့ကွယ်။ ၁၀ ရာခိုင်နှုန်း၊၂၀ ရာခိုင်နှုန်း၊ ၄၀ ရာခိုင်နှုန်း အထိပဲ များသွားပါပြီတဲ့ဗျာ။ ကြာလေ ကြာလေ လူကောင်အကြီး အငယ်တွေ ကွဲလေလေ.. စိတ်နေသဘောထားတွေ ကွဲလာလေ နဲ့ အလိုလိုမှ အမျိုးမျိုးကိစ္စတွေကြောင့် ကျုပ်တို့ မြန်မာပြည် မညီညွတ်နေရတဲ့ အထဲ နောက်နောင် မြင်မာ လူထုဆိုရင် လူအကြီးစားထု၊ လူအငယ်စားထု၊ လူအလတ်တန်းစားထုနဲ့ လူထုတွေ အမျိုးမျိုး ကွဲပြားလာရင် ကျုပ် တို့ မြန်မာပြည် မခက်ပေဘူးလား''
''အလိုလေး.. ဒီလိုဖြင့် ကာယဗလ ကျန်းမာရေး၊ လိုက်စားတဲ့ လူတွေကြောင့်ပဲ တိုင်းပြည် လူထု အစိတ်စိတ် ကွဲ ရတော့မယ်။ ရှင်ဆိုတာပေါ့''
''ကာယဗလ ကျန်းမာရေးလိုက်စားရုံနဲ့တော့ ဒီလိုကွဲရမယ် မဆိုလိုပါဘူးဗျာ။ ခုန မာ ပြောတဲ့စကား အရသာ ကျန်းမာရး၊ ကာယဗလလိုက်စားတဲ့ လူချင်းမှ လက်ထပ်မယ်။ မလိုက်စားတဲ့ လူတော့ မယူ နိုင်ဘူး။ အဲဒီလို ကျန်းမာရေး နဲ့ မညီညွတ်တဲ့လူချင်းသာ ယူကြဆိုတာကို စဉ်းစားပြီးတော့ ဒီလိုဆို ဒီလို ဖြစ်လိမ့်မယ် လို့ ဝေဖန်မိတာပါ။ မာလည်း စဉ်းစားကြည့်ပါဦးလေ။ ဒီအတိုင်းသာ ငါလိလူချင်း၊ သူလို လူချင်းမှ ညားကြရမယ် ဆိုရင် ကိုယ်တွေးသလို မဖြစ်ပေဘူးလားလို့''
''ကျန်းမာရေး လေ့ကျင့်တယ်ဆိုတာက အချိန်ကုန်ခံနိုင်ဖို့၊ သူ့စည်းကမ်းအတိုင်း လိုက်နာဖို့ လွယ်တာ မဟုတ်ဘူး။ အခု မြန်မာပြည် လက်ရှိအခြေ အနေနဲ့ ကြည့်ရရင် လူ ၁၀၀မှာ လူ ၅ ယောက်လိုက်နိုင်ဖို့ က အင်ျိမတန် ခဲယဉ်းတာ။ ဒီတော့ လေ့ကျင့်နိုင်တဲ့ လူတွေက လေ့ကျင့်ကြ၊ ကျန်းမာကြ၊ သန်စွမ်ားက၊ လှပကြပေါ့။ မလေ့ကျင့်နိုင်တဲ့လူတွေ(သို့မဟုတ်)်ဝါသနာပါတဲ့ သူတွေက ကိုယ့်လက်ရှိ (သို့မဟုတ်) ကိုယ်ဝါသနာပါရာကို တိုးတက်အောင် လုပ်ကြပေါ့။ အေး..အရေးကြီးတာက လူဦးရေ တိုးပွားရးအ တွက် အိမ်ထောင်ပြုကြတဲ့ အခါကျတော့ ခုန မာ ပြောသလို ငါလိုလူချင်း၊ သူလိုလူချင်း မခွဲခြားဘဲ တိုင်း ပြည်လူထု အဆင့်အတန်း အရွယ်အစား ဟာ ကြိတ် နှုန်းပျမ်းမျှခြင်းအားဖြင့် ညီိညွတ်သွားအောင် မာတို့ လို မယ်တပ်ကုန်း၊ မယ်ဒဂုံ၊ မယ်ဗလ မဟာဝှာ အစရှိတဲ့ ဘွဲ့ထူးရတဲံ့ အမျိုးသမီးတွေက တိုင်းပြည် ကောင်း ကျိုးအတွက် ရည်စူးပြီးတော့ ကိုယ် တို့လို ကာယဗလ ကျန်းမာရေး မလိုက်စားမိလို့။. အခွင့် အသင့်လို့ ရင်သိမ်းခါးချည့် အားမရှိဖြစ်နေရှာတဲ့ လူ တွေကို ကရုဏာသမုဒယ ထားပြီး.. ''
မာဂရက်က ဖြတ်၍ "အလိုလေး ကိုစူဠက ဒီလိုလာတာကိုး… ကဲ… ရှင့် အဆိုအတိုင်းဖြင့် မောင်ဗမာ၊ မောင်ဒဂုံ အစရှိတဲ့ ဘွဲ့ရတဲ့လူတွေ နဲ့ ကာယဗလ လိုက်စားတဲ့လူတွေကို အပျိုမီးယပ် အပျိုညှပ်စလိ တွေကို ယူရမှာပေါ့"
"အမယ်လေး ဒီလိုတော့ မဆိုဝံ့ပေါင်ဗျာ။ လူသတ်မှုဖြစ်တတ်တယ်ဗျ"
မောင်ဖြတ်စ သည် သူ့ဟာသူပြောရင်း ရယ်မောမိလေ၏။
တစ်ဖန် ဆေးတံကို ဆေးအသစ်ထပ်ဖြည့်ပြီး မီးညှိသောက်ကာ လမ်းလျှောက်ပြန်ရင်း…
"ဟုတ်တယ် မာရဲ့၊ အမှန်စင်စစ်သာ ၄၇ ခု ခေတ်သစ်အမျိုးသမီးတွေဟာ မိမိတစ်ကိုယ်ကောင်းအဖို့ သာ မရည်ရွယ်ဘဲ နဲ့ တစ်နည်းတစ်လမ်းအားဖြင့် တိုင်းပြည်တိုးတက်ရေး၊ ကောင်းစားရေးကို ရည်ရွယ် ပြီးတော့… ကျန်းမာလှပရေး၊ ကိုယ်လုံးကိုယ်ပေါက် တောင့်တင်းရေးကို လိုက်စားတယ်…၊ ခေါင်း ဆောင် နမူနာအဖြစ်နဲ့ ပြပွဲဝင်တယ် ဆိုလို့ရှိရင် မိမိကိုယ်ကို မိမိ ကြော်ငြာရုံလောက်၊ မဂ္ဂဇင်းအဖုံးဖြစ်ရုံ လောက်၊ ကြွား ရရုံလောက်၊ ပြပွဲစီမံတဲ့လူ အမြတ်ရရုံလောက်၊ စိန်ဘယက်ကြီးတစ်ခုလောက်ကိုသာ အာသီသမထားဘဲနဲ့ တကယ့်တကယ်တမ်း တိုင်းပြည်တိုးတက်လေအောင်၊ အကျိုးရှိလေအောင် မယ် အဝှာဘွဲ့တွေကို မြန်မြန် "ရီတိုင်းယား" လုပ်ပြီးတော့ တိုင်းပြည်လူထုထဲမှာ အကျင့်စာရိတ္တအားဖြင့် လည်းကောင်း၊ ကျန်းမာရေး အားဖြင့်လည်းကောင်း၊ ချို့ယွင်းနေရှာကြတဲ့ မောင်တို့လို တေပေမိုက်မှား နေတဲ့လူတွေ စဉ်းစားရလွန်း၊ အညောင်းထိုင်ရလွန်းအားကြီးလို့၊ ပိန်ချည့်လှုပ်လဲ့ အားနွဲ့နွဲ့ဖြစ်နေရှာတဲ့ စာရေးကလေးတွေ၊ ကျန်းမာရေး မလေ့ကျင့်နိုင်လို့… ရင်သိမ်ခါးချည့် အားမရှိဖြစ်နေတဲ့လူတွေ၊ အဲဒီလူ တွေကို တိုင်းပြည်ကောင်းစားရေးအတွက် မဟာကရုဏာနဲ့ မိမိတို့ရဲ့ရုပ်ရည်ရူပကာယအဆင်းသဏ္ဌာန် တွေ ပြပြီးကော့… အကျင့်စာရိတ္တ မကောင်းတဲ့လူတွေကို အကောင်းဖြစ်လာအောင် တိုင်းပြည်လူထုမှာ လည်း ပျမ်းမျှခြင်းအားဖြင့်… လူကောင်း လူရွယ် စိတ်နေသဘောထားတွေ တညီတညွတ်တည်း ဖြစ် လာလေအောင် ငါလိုလူချင်း၊ သူလိုလူချင်းမှ မခွဲခြားဘဲ၊ အဲဒီလို ချို့ယွင်းနေကြတဲ့လူတွကိုမှ ရွေးပြီး တော့ အကြောင်းဆက် ပေါင်းဖက်ကြမှ နိုင်ငံမှာ တကယ် အရာရောက် အကျိုးရှိတော့မပေါ့"
"ဒီကိစ္စတွေဟာ ကိုယ့်တိုင်းပြည် တိုးတက်ရေးအတွက် နိုင်ငံတကာသွားပြီး ပြည့်တန်ဆာမလုပ်တဲ့ ဂျပန်မတွေလောက် မဆိုးပါဘူး…၊ အနောက်နိုင်ငံက အပျိုချောတွေလည်း ဒီလို ရူပ ကာယတွေပြပြီး တော့… ယောက်ျားတွေကို လိုရာဆွဲငင်နေကြတာပေါ့၊ မ ကပြလိုက်ရင် ဘယ်ဖိုသတ္တဝါမှ မခံနိုင်ဘူး။ လိုရာညွှတ်ပါလာရတာပဲ…။ မြန်မာပြည်က မယ်ဟဝှာတွေလည်း အဲဒီလို လုပ်ပြကြမှ မ ကောင်း မှ ပြည် သာ၊ မျှပေါင်းမှ ညီညာဆိုတဲ့စကား ထွန်းကားလာတော့မပေါ့"
"နို့ပြီး… တိုင်းပြည်ကောင်းစားရေး လိုရင်းမှာလည်း လူကောင်ကြီးဖို့၊ အားအင်သန်ဖို့ ဒီလောက်မလိုပါ ဘူး။ ခု… ကမ္ဘာစစ်ကြီး ကို ငြိမ်းအေးသွားစေတဲ့ အနုမြူလောကဓာတ်ဆရာကြီးတွေဟာ ထိပ်ပြောင် ပြောင်၊ မျက်ကွင်း နက်နက်၊ ပါးရိုးပေါ်ပေါ်၊ ပိန်ညှော်ညှော်၊ ခါးနွဲ့နွဲ့ကြီးတွေ… ဆိုတာကို သူတို့မမြင်ဖူး ဘဲနဲ့ ပြောရဲပါတယ်"
ဤသို့ မောင်ဖြတ်စသည် လမ်းလျှောက်၍လည်းကောင်း၊ ရပ်၍လည်းကောင်း သူထင်ရာ သူလိုရာများ ကို လျှောက်၍ ပြောနေလိုက်ရာ မာဂရက်မှာ သူ ပြောသည်တို့ကို ပီတိကျသွား၍ပဲလား သို့မဟုတ် အိပ် ချင်ယောင် လွှမ်းသွား ၍ပဲလား ခွဲခြား မပြောတတ်။ စောစော က ဖြစ်ပေါ်နေသော ဒေါသရောင်၊ သောက ရောင် တို့မှာ မျက်နှာပေါ်မှ လွင့်စင်သွားသော ခပ်စောင်းစောင်း ကလေး ခုတင်တိုင်ကို မှီထိုင်နေရာမှ ထွေးထွေးအိအိ ကိုယ်ကြီး ကိုစန့်စန့်ရန့်ရန့် လှဲလျောင်းလိုက်လေ၏။
မောင်ဖြတ်စသည် စကားပြောနေရာမှ ရပ်လိုက်ကာ "သြော် မာ အိပ်ချင်လှပြီ ထင်ပါရဲ့…၊ ညဉ့်နက်လှ ပါပြီ…။ ကဲ… အိပ်အိပ်" ဟု ဆိုတာ ခြင်ထောင်ကို ချလိုက်၍ စောင်ကလေးတစ်ခုကို ယုယစွာ လွှမ်းခြုံ ပေးလေ၏။
ဤတွင် မာဂရက်သည် ကြိုက်၍ပင် မရှက်သလော၊ ငိုက်၍ပင် မရှက်သလော အတိအကျ မပြောနိုင်။ မောင်ဖြတ်စ ယုယုယယ ပြုသမျှကို မျက်လုံးကလေး မမှိတ်တမှိတ်၊ မျက်တောင်ကလေး စင်းစင်းနှင့် ကလေးငယ် ကလေးသဖွယ် ငြိမ်သက်စွာ ခံနေသဖြင့် မောင်ဟဝှာမှာ နှလုံးရည်ကြွလာကာ အုံးစက်ရာ ယှဉ် လိုက်တော့ မည် စိတ်ကူးဖြင့် ဓာတ်မီးခလုတ်ကို ဖျောက်ခနဲ မှိတ်လိုက်လေ၏။
သို့သော် သူ ရည်ရွယ်သလို မှောင်၍မသွား။ မီးမမှိတ်မီကထက်ပင် ပို၍တစ်ခန်းလုံး ဖြူဖြူကြဲကြဲကြီး လင်းလာလေ၏။
အကြောင်း မူကား သူ ထင်သကဲ့သို့ ညဉ့်မနက်ဘဲ၊ နံနက်ချိန် အရုဏ်ကျင်း၍ မိုးစင်စင်လင်းချေပြီ တကား။
Posted by SHWE ZIN U at 11:00 AM